Kedu ihe bụ Sistemụ Njikwa Nkwekọrịta? Ruo kè Ha A Popularaa Ka Ha Na-ewu ewu? | Martech Zone
Tuesday, August 15, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Na afọ nke atọ nke SpringCM Ọnọdụ nke njikwa nkwekọrịta, ha na-akọ na naanị 32% nke ndị na-aza ajụjụ nyocha na-eji usoro njikwa nkwekọrịta, ihe karịrị 6% karịa afọ gara aga.
Usoro Njikwa Usoro nye nzukọ ihe eji ede ma ọ bụ bulite nkwekọrịta na ntukwasi obi, kesaa nkwekọrịta ahụ, nyochaa ọrụ, jikwaa ndezi, gbanye usoro nnabata, yana mkpokọta nkwekọrịta nkwekọrịta maka ịkọ akụkọ.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, mana ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ na imirikiti ụlọ ọrụ na-eziga nkwekọrịta site na email. N'ezie, Mmiri CM na-akọ na ihe karịrị 85% nke ụlọ ọrụ ka na-etinye nkwekọrịta na ozi ịntanetị. 60% nke ndị zaghachiri ajụjụ kwuru na ha na-ejikwa usoro nkwekọrịta niile site na email. Nke a na-eweta nsogbu n'ihi ihe abụọ:
Email bụ ọ bụghị usoro nchebe njem. Faịlụ nwere ike mfe amata na ibudata site na ekwu network ọnụ ebe ọ bụla n'etiti nnata site hackers.
Polọ ọrụ nwere ihe Obodo ma ọ bụ ndị ahịa na-ejegharị ejegharị, nke pụtara na ha na-arụ ọrụ na enweghị nchebe, netwọkụ mepere emepe anaghị enyocha maka nchekwa mana ndị ọzọ nwere ike nyochaa ya.
N'ime òtù ndị na-eji usoro nkwekọrịta nkwekọrịta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime anọ (22%) na-ekwu mitigating ize ndụ bụ ihe kacha ha mkpa. Ma ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu maka akpaaka na usoro nkwekọrịta ha, ọtụtụ ka na-agbaso ntuziaka, usoro nkwekọrịta na-enweghị nchebe. Akpaghị aka workflow na usoro nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla na-enye ohere dị mkpa maka ịre ahịa na-aga nke ọma, ma wepụ ihe ịma aka na ihe egwu dị na ya. Ulo oru nke na achoputara ma mejuputa atumatu oru nkwekorita nwere ike inweta onu ogugu na onu ogugu banyere nkwekorita.
Nkwekọrịta bụ ndụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ, mana azụmahịa na-akwụsịkarị mgbe ha ruru ọkwa nkwekọrịta ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji enyocha ihe ịma aka ndị metụtara usoro njikwa nkwekọrịta. Ebumnuche anyị maka ọmụmụ ihe a bụ ịnye ndị na-eme mkpebi ihe nghọta ga-eme iji bulie usoro njikwa nkwekọrịta ha. Will Wiegler, onye isi osote onye isi ala na CMO na SpringCM
Akụkọ zuru ezu na-ekpughe ihe ọmụma banyere nnabata nke teknụzụ n'ime usoro njikwa nkwekọrịta yana nsonaazụ nke itinye usoro njikwa nkwekọrịta. M na-appended ntọhapụ n'okpuru maka ozi ndị ọzọ.
Budata steeti njikwa nkwekọrịta
SpringCM na enyere aka oru aka site na iweputa ihe omuma akwukwo ohuru na ikpo okwu oru, nke n’enye ndi ndu nkwekọrịta ndụ ndụ (CLM) ngwa. SpringCM na-enye ụlọ ọrụ ikike ịbawanye uru site na ibelata oge ejiri jikwaa akwụkwọ azụmaahịa dị oke mkpa. Ndị nwere ọgụgụ isi, arụmọrụ na-akpaghị aka na-eme ka mmekorita akwụkwọ gafee nzukọ site na desktọọpụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. Emere site na igwe ojii, nke nwere ike ịkọwapụta, akwụkwọ SpringCM na njikwa njikwa nkwekọrịta na-ejikọ na Salesforce, ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka azịza kwụ ọtọ.
Tags: nkwekọrịta ndụ ndụnkwekọrịta ndụnkwekọrịta nkwekọrịtausoro njikwa nkwekọrịtanjikwa njikwa ọrụ nkwekọrịtammiriọnọdụ nke njikwa nkwekọrịta